Dom » Galitaanada ku qoran "ikea"
News, Waalid smart
Laba shirkadood oo isku laaban ayaa ku biiraya xoogagga - La kulan BYGGLEK, IKEA iyo LEGO
IKEA iyo LEGO labaduba waxay jecelyihiin inay waxyaabo kaladuwan iskudarsadaan;) Mashruucoodii ugu dambeeyayna wuxuu noqon karaa midka ugu xiisaha badan dhowaanahan! IKEA iyo Kooxda LEGO waxay is biirsadeen oo waxay abuureen xalal xiiso badan oo loogu talagalay ...
Indhooleyaal IKEA Fyrtur - dib u eegis fiidiyow
fyrtur, Ikea, daahyada
Waxaa jiray furfurnaan, waxay ahayd dib u eegis, sidaa darteed waa waqtigii dib u fiirinta fiidiyowga! Indhoolayaasha IKEA Fyrtur ayaa durba ku jiray kanaalkayaga YouTube. Kaalay oo soo daawo!
Apple HomeKit, Guriga Google, Kaaliyaha Hoyga, IKEA Home Smart, dib u eegista
IKEA Fyrtur blinds - dib u eegista indhoolayaasha caqliga leh ee HomeKit, Google Home iyo Alexa
Indhooleyaal IKEA waa wax aan waxbadan ka akhriyay oo aan qoray warar qaar. Waqtiga oo dhan, si kastaba ha noqotee, waxaan sugayay daqiiqadda markaan iyaga ku heli lahaa gacmahayga, isku day oo hubi haddii ay dhab ahaan yihiin kuwo qabow sida ...
Ikea Fyrtur - Smart Roller Blind oo ka socda HomeKit!
Ikea, ikea fyrtur, indhoole caqli badan
Sida Arbacada kasta, waxaan heysanaa xirmo kale adiga! Maanta waxaan kuu siideyneynaa indhoolaha Fyrtur-ka ee indhaha ee Ikea adiga! Maxey yihiin gudaha? Waxaad ka heli doontaa filimka :)